Ukuze wenze indlu ifudumele futhi inhle, kubalulekile ukufaka isakhiwo ezindongeni, njengengqimba epholile. Kuyini, namuhla uyazi iningi labanikazi bezindawo zasemadolobheni. Leli yigama elithi "i-pie" elikhethekile, elihlangene kusuka ezintweni zokwakha zesimanje, ngasinye esenza umsebenzi othile wokuzivikela. Ukufakwa kwesistimu enjalo kwenziwa ngokwemithetho ethile.
Izinjongo kanye nezici zokuklama
Izakhiwo zangasese zakhiwe zisetshenziselwa ukuthuthukisa izimfanelo zokugcina ukushisa. Ukwakhiwa kwalolu hlobo lwakhiwe kuvame ukuhlanganisa izinto ezifana nalezi:
Amafilimu e-Hydro ne-vapor,
Hlanza isikhumba sangaphandle.
Ukwakhiwa kwesikrini esivuthayo umoya, njengoba ubona, kuyinto elula. Ngokuvamile, lezi zinhlelo zihlangene ngqo kusayithi, ngemuva kokwakhiwa kwezindonga. Ngezinye izikhathi ukufakwa kwezindlu ezisetshenzisiwe nezakhiwo ezilungisiwe, ezenziwe ngendlela yezimboni. Kunoma yikuphi, lezi zakhiwo azilondolozi nje kuphela abanikazi bezindlu ngokushisa, kepha futhi zivikela ekubhujisweni kwezindonga zaleso sakhiwo, okwandisa impilo yabo yesevisi.
Kusukela kwezinye izinhlobo ze- façade systems ventilation systems zihlukaniswa kuqala kokungena kocingo lapho umoya ugeleza ngokukhululekile, ususe umswakama. Njengamanje, iziqhakazile ezinamathela kulolu hlobo zibhekwa njengeziphumelela kakhulu futhi zisetshenziselwa yonke indawo. Izindlela ezinjalo zivame ukubonakala ezakhiweni zokuhlala ezitolo ezahlukene, ezakhiweni zomphakathi, ezindongeni zezitolo, amathilomu, izindawo zokudlela, izakhiwo zokuzijabulisa, njll.
Ngakho-ke, lo mklamo wesakhiwo sokuhlala uvame ukubaluleka kakhulu - isiteji esinomoya ovuthiwe. Kuyini, sithole. Okulandelayo, ake sibone ukuthi yiziphi izinhlobo zezinhlelo ezinjalo ezikhona.
Lapho kusetshenziselwa isitholi sokuphuza umoya, izinto ezahlukene zokwakha zingasetshenziswa. Njengesi-insulator yokushisa, i-polystyrene noma uboya be-mineral isetshenziswa kakhulu. I-lining ibuthwe kusuka ebhamini lobubanzi obufana nokuqina kwe-insulation, noma kusukela kuphrofayli e-aluminium eyenzelwe ngokukhethekile. Njengesikhumba sokuqeda singasetshenziswa ukugqoka, ukuvimbela indlu, ukugada, iphrofayili yensimbi noma i-porcelain stoneware. Inguqulo yokugcina ye-cladding ibhekwa njengento ehlonishwa kakhulu.
Izici zokwakhiwa kwezingqimba ze-ceramic granite
Amasistimu avumelekile onomshini onjalo owedlule asanda kuthanda kakhulu. Ngokuyinhloko sibonga ukubukeka kwayo okuhle. Kulabo abafuna ukwenza indlu yabo ivumelane futhi ikhangele, kuyadingeka ukuthi usebenzise i-facade enjalo yokuphefumula ukuze iqede futhi ifudumele. Yiluhlobo luni lwesistimu, futhi ukuthi lugqoke kanjani ngqo ezindongeni - ake sixoxe kabanzi.
Yiziphi izinzuzo zezingqimba ze-ceramic granite
Izinzuzo zezinhlelo ezinjalo zokuphuza umoya zingafakwa ekuqaleni:
Isikhathi sonke kanye nokuphikisana. Hlanganisa uhlelo lwezingqimba ezivuthiwe zalolu hlobo lungaba nhlobo nganoma yisiphi isikhathi sonyaka nasendongeni eyenziwe nganoma iyiphi into.
Ukuphila isikhathi eside ngaphandle kwesidingo sokulungiswa.
Ukuzinza kwezici ezihlukahlukene ezingalungile zemvelo.
Kulula ukugcinwa. Ukugeza porcelain kulula kakhulu. Ukuze ubuyele endlini ukuze ubukeke kahle, udinga nje ukuthulula amanzi ezindongeni nge-hose.
Ukubukeka okuhle kakhulu nokuhlonishwa. Ama-facade, aqedile ngale ndlela, abukeka ahlanzekile, aqale futhi acebile.
Ukuphikiswa komlilo. Ngokuvamile, izinto ezisetshenzisiwe kuphela ezingasetshenziswa emhlanganweni wezinhlelo ezinjalo.
Ukungahleleki kwaloluhlobo lokuqedela kungabizwa ngokuyinhloko izindleko eziphezulu kanye nokunye okuyinkimbinkimbi yokufakwa. Kukhona i- façade ene- ventilated eyenziwe nge-porcelain stoneware, evame kuphela ngamakhosi ochwepheshe. Kanti futhi, ukungaqondile ngqo kwezinhlelo ezinjalo kungabizwa ngokuthi isidingo sokwenziwa kwegranite ye-ceramic ukuze kulandelwe. Ukuthola ukwaziswa okulungele lesi sakhiwo esithile kunzima kakhulu. Emva kwakho konke, ubukhulu bamatayela kumele bube ubuningi besayizi sakhiwo ngokwaso. Izici zokusika uma wenza imisebenzi yokuqeda kudikibala kakhulu. Uma kungenjalo, isicabha sizobuka inharmonious.
I-subsystem for facades umoya
Leli yigama lesiklamo esikhethekile, lapho okuqedile khona-ekugcineni kwethu i-porcelain stoneware - ifakwe ezindongeni zendlu. I-subsystem ye-facade ene-ventilated ihlanganisa izinto ezinjengefolda, i-heater ne-waterproofing.
Uma isetshenziselwa ukuqedela i-granite ye-ceramic, i-lath yenziwe ngamaphrofayela akhethekile e-aluminium we-G enemihlobiso no-U. Njengomshini wokushisa, uboya bombili wamaminerali nokwandiswa kwe-polystyrene kungasetshenziswa. Ukuvalwa kwamanzi kwenziwa ngefilimu ekhethekile ye-membrane. I-subsystem enjalo yezingqimba ezivuthiwe inezinga eliphakeme lokuthembeka. Iphrofayili ye-aluminium ingakwazi ukumelana kalula nesisindo samathayili, futhi ukufakwa kwezinto zanamuhla kuthuthukisa kakhulu ukusebenza kwezindonga.
Imithetho yokuhlanganisa ubuso obunamapayipi avela nge-porcelain stoneware
Esinye sezizathu eziyinhloko zokwakheka kwemiklamo enjalo ukubukeka kwabo okukhangayo. Ngoba umhlobiso wezakhiwo uvame ukukhetha ithayi elikhulu (600x600, 800x800 no-800x1200 mm). Izakhiwo zezindlu - ukwakheka kule ndawo kuvame kakhulu kakhulu, ngakho-ke izici ezincane ze-ceramic-granite azibukeli kahle kakhulu.
Ngemuva kwe-tile, ukuhlanganiswa ngokuvumelana nomklamo wangaphandle wesakhiwo, kuzokhethwa, ungaqhubeka nomhlangano wangempela wesistimu njengengqimba ephilile. Kuyini nokuthi yikuphi ukuklama kwezinhlelo ezinjalo, manje uyazi. Okulandelayo, cabangela ubuchwepheshe bokukhuphula zonke izakhi zalesi sici.
Umhlangano wesistimu yomoya ohambelana nalolu hlobo uhlanganisa izinyathelo ezilandelayo:
Ukumaka udonga kubakaki,
Ukufakwa kwangempela kwalezi zakhi,
Ukufakwa kwe-hydro ne-insulation thermal,
Umhlangano wezingqimba zangaphandle ze-ceramic-granite.
Ukulungisa lezi zakhi eludongeni kufanele kube njengezitebe ngangokunokwenzeka. Kusukela ekuqineni kokufakwa kwabo kuncike ekutheni esikhathini esizayo ngokucophelela kuzobukeka kanjani njengengqimba engenawo umoya. Ubuchwepheshe babakaki abandile kubandakanya ukumaketha okuyimfuneko kokuqala. Yenziwe kanje:
Imigqa yokukhanyisa iqhutshwa: imigqa engezansi enezingqimba kanye nemigqa emibili eqondile (okuqhelelene naso eduze kwesakhiwo). Ungenza kahle imakethe usebenzisa ithuluzi lokulinganisela.
Kuzo zonke imigqa emithathu amaphuzu wokugcizelela wabakaki afakwa. Kulokhu, ipensela yokwakha engapheli isetshenziswa.
Izikhonkwane zokubheja zenziwa ngokumaketha nge-perforator. Kuzo zonke zazo kuyadingeka ukuthi ufake kwi-paronit cushion. Amakhonksi ahlanganiswe amathanga angama-anchor nge-screwdriver.
I-Hydro nokufakwa kwe-thermal
Qhubeka nomhlangano wezinhlaka ezinjengamapayipi e-ventilated granite, ukufakwa kwezinto ezikhuphula izici zokuzivikela ezindongeni zesakhiwo. Amacwecwe we-heater ahlanganiswe kuwo ngokusebenzisa izindawo ezikhethekile. Izikhonkwane zingenziwa ngqo ngabakaki ngokwabo. Ngamanye amapuleti ayengezwa ngokunamathela ngamapulangwe epuleti. Izakhi zokuzivikela zesigcawu zifakwe kusuka phansi kuze kulandelwe ukuhleleka. Esigabeni esilandelayo, amapulethi avaliwe ngendwangu engenawo amanzi. Ukuliqinisa lenziwe odongeni ngokuqondile emkhatsini wokushisa ngamanetha enhlobo efanayo. Ifilimu iphakanyiswe ngokuzungezile ngokugqama okungenani ngo-10 cm.
I-porcelain granite facade: ubuchwepheshe be-frame umhlangano
Ukuze kusetshenziswe i-lathing ngaphansi kwe-tile, iphrofayli ivame ukusetshenziswa, umbala okufanisa ukususwa kwe-sutures. Ngezinye izikhathi esetshenzisiwe futhi enhle ephosiwe esibukweni ukuqedela izakhi ze-aluminium.
Ukufaka amaphrofayili akhethiwe e-U uqhubeke ngokushesha ngemuva kwekhanda lokungena kwamanzi elungisiwe ekugxilweni. Amathiselwe kubakaki endaweni yokuma ngokusebenzisa izikrini. Amaphrofayli omkhawulo asekelwe kude ekugcineni kwezitini ezivela ekhoneni. Zonke iziqondiso kufanele zihanjiswe ngokucophelela ngezinga lokwakha futhi zihlale endizeni.
Isinyathelo esilandelayo ukuhlanganisa izingxenye zekhoneni zefreyimu. Zenziwe ngephrofayela ye-aluminium ene-L. Umhlangano wenziwa ngendlela yokuthi i-element central vertical ihamba phambili ehambisana nengxenyana yesakhiwo, kanti lezi zingaphakathi zigcinwe ngokuqinile emakhombandlela angaphandle a-U.
Ukufakwa kwesistimu yomoya wokuphefumula kuqediwe ngokufakwa kwe-tile ye-ceramic tile ngokwayo. Qinisekisa ukwaziswa okubhekene nalo lath for kleymers akhethekile. Okokuqala, faka umugqa ophansi wabo, usebenzisa isakhiwo sokwakha. Lungisa ama-kleimers kuphrofayili ene-U nge-rivets. Okulandelayo emgqeni wokuqala walezi zibopho zifakwe amathayili. Umfakisi wezingqimba ezivuthiwe uyayisekela ngesandla sakhe sokunxele, futhi ilungelo lilungisa ama-Kleimers angaphezulu ukuze i-porcelain stoneware igcinwe ngokuqinile kwi-crate. Ukubeka okugxile nokuqondile kwezakhi kuhlolwe njalo ngezinga.
Inqubo yokuqoqa isakhiwo esinjalo njengefayili engenawo umoya ovela e-porcelain stoneware, njengoba ubona, iyinkimbinkimbi kwezobuchwepheshe. Yiqiniso, abantu abanolwazi ekwenzeni imisebenzi ehlukene yokwakha nokufakwa bangakwazi ukubhekana nalolu msebenzi ngokuzimela. Kulabo abangenawo amakhono akhethekile kule ndaba, ukufakwa kwesistimu enjalo kufanele kusatsheleliswe ochwepheshe.